Home > Ngwaahịa > Igwe ọkụ (Total 24 Ngwaahịa maka Igwe ọkụ)
Igwe ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Igwe ọkụ manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Igwe ọkụ na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Igwe ọkụ na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Igwe na-acha ọkụ na-acha ọkụ
Tag: Igwe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ , Mgbachapụ Anya Nchebe nke anyanwụ , Igwe Ọgụgụ Pụrụ Iche Ịgbanwe
Ngwaahịa ahụ dum dị mkpa, ọdịdị dị mma ma mara mma. Enwere ike ịgbanye oghere ọkụ dịka mkpa dị mkpa, na ntụgharị kachasị elu nwere ike ịdị ogo 360. N'ọkụkụ ọkụ, nchikota nke ìhè ọkụ na ntanye ọkụ nke ọkụ, tinyere atụmatụ mmechi nke akụkụ ọkụ...
Okpomoku Igwe n'anwu n'èzí Okpukpo Umu Ohu Ibu Ogwu
Tag: Okpomọkụ nke anyanwụ na-acha ọkụ , Ebube na-ekpuchi elekere , Mgbidi Mmiri nke Mmiri
Ogige Ngwá Agha Mmiri bụ ìhè nke a na-enye n'ime ogige ahụ iji mee ka ụjọ jide ụmụ anụmanụ, na-egosi ebe ndị mara ụlọikwuu, na ihe ndị ọzọ, na ọ bụ ihe nkedo ọkụ. E nwere ọtụtụ ụdị anyanwụ Solar Camping Light s . Ugbu a, ha bụ ìhè ụdị oyi dị...
Igwe ọkụ na-enwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Tag: Ike nke oma , Ihe Omume Agbanwe Omume , System Control Control
Ike anyanwụ bụ ihe na-adịghị agwụ agwụ, nke dị ọcha, nke na-adịghị emerụ emerụ ma na-agbanwe agbanwe. Ojiji nke ike anyanwụ, uru na-enweghị atụ nke ịdị ọcha, nchebe dị elu, obosara obosara na ike zuru oke, ogologo ndụ na njigide nke ike ndị ọzọ dị...
Igwe onu ogugu nke uzo di otutu
Tag: Multi - Chip Integration , Elu - Omimi Waterproofing , Ebube Kasị Mma
Igwe ọkụ Ethernet na-akwado ìhè ìhè anyanwụ ma na-eji ya n'abalị, n'enweghị mgbagwoju anya dị oke egwu ma dị egwu, na - enwe ike ịmezi oriọna ndị ahụ, yabụ nchekwa, nchekwa ọkụ, mmetọ - n'efu, ike na ntụkwasị obi enweghị ọrụ ntuziaka, na...
Enwere ike ịgbapụta iji gụọ ìhè anyanwụ
Inye Ike: High scale production line, with a daily capacity of 20,000 PCS, can fully guarantee customers' supp
Tag: Igwe Ọgụgụ Ọgụgụ Akwụkwọ nke Ọmụmụ , Umu Igwe uhie USB nke nwere ike gbanwee , Anya Igwe Igwe na-ahụ maka ihu igwe
Ihe dị 100% ọhụụ dị elu dị elu nke dị elu 100 nke nwere ike ịnweta ọkụ nwere ike ịwụnye batrị. Usoro nkwụnye ụgwọ: mgbe a na-ebo ụlọ ọrụ anyanwụ n'okpuru anyanwụ, njirimara ga-enwu. Akwụsịla oriọna na ebe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. A na-etinye...
Ngwá ọkụ na-acha ọkụ ọkụ maka nchịkọta
Tag: Ogige mmiri na-adịghị ekpuchi , Ndabere nwere ike iwepụ obere ohere , Egwuregwu Ngwurugwu Na-emepụta N'èzí
Ntube mmiri, ihe niile na-ekiri; Igwe ọkụ abalị, ọkụ ọkụ azụ abalị; Ebe ngbacha, ọkụ ọkụ; Ịrụ ọrụ ụgbọ ala, ebe nchekwa ụgbọ ala, wdg. Nhazi ahụ na-ahọrọ ụdị akwụkwọ ọmarịcha mara mma dị ka ọ ga-ekwe omume, tinyekwa n'ụlọ ahụ bụkwa mma ịchọ mma....
Mbara igwe ọkụ na-enye aka ịdọ aka ná ntị
Tag: Mbara Igwe , Mgba ọkụ Osimiri Red na Blue Flash , Ala na-acha uhie uhie
A na -eji ìhè 6W polycrystalline na-eme ka ndị na-emepụta okporo ụzọ na-emepụta okporo ụzọ dị iche iche na-eme ka ọkụ na-acha uhie uhie, nke dịkarịa ala ruo afọ asatọ. Ịgba chara na anyanwụ maka awa asatọ nwere ike ịrụ ọrụ 120 awa ma na-agbapụta...
Mpempe akwụkwọ ọhụrụ nke ike ike anyanwụ maka oge ezumike
Tag: Nylon Leisure Bag , Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị , Akpa Njem Mmiri
Akpa njem njem , ike anyanwụ, ike anyanwụ dị egwu, ịkekọrịta oge dị mma, dị mfe na ejiji, dị mfe ma na-emesapụ aka, akpa ntụrụndụ nylon 520D, 5W American aborted batrị, 22% arụmọrụ, obere mpaghara na ike buru ibu, ọ dịghị mkpa nke fiber floor eji...
Enweghi ike igosi ihe na-eme ka mmadu ghara igha
Tag: Ọ dịghị Stroboscopic LED Eye oriọna , Igwe ọkụ na-akwado ọkụ anyanwụ , Mmetụ Anya Anya Anya Anya
Ọ dịghị stroboscopic ikanam anya oriọna : Minimalist ịke / aka atọ nso dimmer / rotatable oriọna pole / rechargeable eji / na-abụghị stroboscopic ikanam anya nche oriọna. Volta awara awara: Ntinye 5V dị ugbu a: 1000mA USB ọdụ ụgbọ mmiri na-ahapụ ụlọ...
Tag: Ike Igwe Mgba Igwe Ọhụụ , Ọpụpụ AC DC , Ọdịdị Na-ahụ Maka Ọdịdị Na-ahụ Maka Ọdịdị Anyanwụ
Igwe ọkụ ọkụ nwere ike anyanwụ dị iche iche bụ setịpụrụ ọkụ, ịgbanye ngwa ngwa dijitalụ, ịkwanyere ngwa eletriki eletrik na otu n'ime ike AC na DC na-achịkwa mgbagha. Enwere ike iji nlezianya na ijikwa nchịkwa site n'iji njikwa nchịkwa nwere...
18LED N'èzí Anyanwụ Na-acha Lawn
Tag: Mmiri Spotlights Mmiri , Amphibious Ụdị Mmiri , Solar Energy Projector Lamp
Igwe ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ bụ ụdị ọkụ oriọna amphibious bụ nke ike anyanwụ na-enye. Oriọna ahụ na-eji arụ ọrụ nke ọma na-eme ka ike anyanwụ ghọọ ọkụ eletrik ma debe ya na batrị batrị maka ọkụ ọkụ. Igwe na-ahụ maka ìhè ìhè dị iche iche na-eme ka a...
Igwe ọkụ akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Igwe ọkụ ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Igwe ọkụ kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Igwe ọkụ wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.